MUUQAAL:Ilhaan Iyo Rasahiida oo Fastiin booqanaya Israil Xayirad Saartay. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
[ February 20, 2020 ] SAWIRO:- Askartii ugu badnayd ee ku dhaawacantay Dagaalkii shalay oo Muqdisho la geeyay + Kheyre oo Booqday.	Faalloyinka
[ February 20, 2020 ] Ninkii Seddexaad ee loo haystay Kufsigii Caaisha Ilyaas oo lagu heshiiyay in lasii Daayo.	Faalloyinka
[ February 20, 2020 ] DAAWO VIDEO:Xildhibaan Dheeg”Muuse Biixi Gabaygii Qudbadisa Kacdoon Beel Buu Ahaa,Laba Beel oo Midi Muuse Biixi Beeshisa Tahayba Loo Tiriyey”	Maqal Iyo Muuqaal
HomeMaqal Iyo MuuqaalMUUQAAL:Ilhaan Iyo Rasahiida oo Fastiin booqanaya Israil Xayirad Saartay.
MUUQAAL:Ilhaan Iyo Rasahiida oo Fastiin booqanaya Israil Xayirad Saartay.
August 17, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka maanta 2
Ilhaan Cumar ayaa soo saartay qoraal ay uga jawaabeyso tallaabada Israa’iil ay ugu diiday in dhulkeeda ay galaan iyada iyo xildhibaan kale oo lagu magacaabo Rashida Dhaalib.
“Xubin ahaan oo ka tirsan guddiga Arrimaha Dibadda (Congress-ka), waa shaqadeyda in aan la socdo kaalmada caalamka ee Mareykanka uu bixiyo iyo sharciyeynta ku dhaqanka xuquuqda aadanaha e daafaha caalamka”, ayey Ilhaan ku qortay warbixin at ku baahisay boggeeda Twitter-ka.
“xayiraaddii Trump ee Muslimiinta uu saaray waa tallaabada ay Israa’iil meel marineyso, markan waxaa la bartilmaameedsaday laba xubin oo si sharci ah loogu doortay aqalka Congress-ka”.
“Waxaa wax laga xumaado ah in arrintan aysan la yaab lahayn, marka loo eego dhanka bulshada, kaas oo si joogto ah oga goos haysta dadaallada nabadda”, ayey tiri Ilhaan.
DAAWO VIDEO:Fanaan Cawaale Aadan oo Showgiisi Noqday Mid Taarikhda Galay ,kana hadlay Tv Caayey.
Madaxweyne Farmaajo maxuu iskugu dhiibay Itoobiya, Maxaase iska bedelay Mawqifkiisii 2017?
Gabdhaasu way lalmanayaan ee yaa la taliyo oo ay taladiisa maqlayaan?Wayse fiican tahay in ay ka hadlaan arimo badan oo quseeya shaqooyinkooda.Hase ahaatee khatarteeda bay leedahay.Waxaan dhihi karaa Ilhaan baa duufsatay Rashiida.Waayo Rashiida markii la doortay mudo badan bay aamusnayd.Meesha ay Ilhaan habeen iyo maalinba qaylada oogeeysey.
MD Deni oo Magacaabay Guddi ka kooban 11Xubnood oo ka shaqeysanaya Shirwaynaha Wadatashiga.
Madaxweynaha dowlad-Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa maanta oo Talaado ah magacaabay, guddi qaabilsan qaban-qaabada Shirweynaha Wada-tashiga Puntland, oo sida qorshaysan la qaban doono 15-ka bisha soo socota ee March [Read More]